တောင်သမန်သားလေး: May 2013
သိပ် ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် ။ ဟိုကောင့် ဟင်းက ဆီပြန်ပဲ ။ အရသာရှိတဲ့ ဟင်းတခွက်ပဲ ။ သူ့ ဟင်းကို သူများ တောင်းစား မှာ မနာလိုတော့ မျက်နှာ စူပုပ်ပြီး စား ၊ ဖွက်ပြီးစားနဲ့ သူ့ အရသာရှိတဲ့ ဟင်းက အရသာရှိပါ လျှက်နဲ့ အရသာပျောက် သွားတယ် ။ တဖက်သူက ဘာမှ မဖြစ်လိုက်ဘူး ။
ဟိုတယောက်ကို ဒီနေ့ အကဲခတ်ရ တာ သူ့ပညာတွေ နောက်လူ မြင်သွားမှာ မနာလိုတော့ လူလာရင် Mozilla ကို Minimize လုပ်လိုက် ၊ လူသွားမှ ပြန်ကြည့်လိုက် ။ ဒီလိုနဲ့ သုံးနှစ် ကြာလည်း ဒီကောင် တိုးတက်မယ့် ကောင် မဟုတ်ဘူး ။
ကိုယ်မတတ်တဲ့ ပညာ သူတတ်သွားမှာ ၊ ကိုယ့်ထက်သာ သွားမှာ မနာလိုတာတွေ ပဲဖြစ်နေရင် ကိုယ်ပဲ ပူလောင်မယ် ။ ကိုယ်ပဲ အသုံးမကျတဲ့ ပညာမဲ့ ဖြစ်ပြီး သူများ အခိုင်းအစေ ဘ၀နဲ့ တသက်လုံး နေရမယ် ။
စီးပွါးရေး ဘာသာရေး ပညာရေး နိုင်ငံရေး ဒီအရေးအားလုံးမှာ အမှန်တကယ် တိုးတက်ချင်ရင် မနာလိုစိတ် ကို ရှက်ပါ ။
လူတိုင်း ကိုယ့်ထက် သာပါစေ ဆိုတဲ့ စိတ်ကို မွေးမှ ကိုယ်က သူတို့ထက် သာလာမှာ ။ လူတိုင်း ကိုယ့်ထက် သာသွားမှာ မနာလိုဖြစ်နေရင်တော့ အမြဲတမ်း သူတို့ အောက်မှာပဲ ကျွန်ဖြစ်လိမ့်မယ် ။ ””
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အိပ်စက်ချိန်လိုအပ်မှုချင်း မတူညီပါဘူး။ တချို့လူတွေက တစ်ညမှာ ခြောက်နာရီအိပ်ရုံနဲ့ အိပ်ရေးဝတတ်ပေမယ့် တချို့ကျတော့ ရှစ်နာရီနဲ့အထက်အိပ်မှ အိပ်ရေးဝတတ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ တစ်ညမှာ အိပ်စက်ချိန် ခုနစ်နာရီမှ ကိုးနာရီရှိဖို့ အကြံပေးထားပါတယ်။ အိပ်ရာကနေ လန်းလန်းဆန်းဆန်းနိုးလာပြီး တစ်နေ့လုံးလည်း တက်ကြွလန်းဆန်းနေတယ်ဆိုရင် သင့်မှာကောင်းမွန်ပြည့်ဝတဲ့ အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာ အလေ့အထ ရှိတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
၁။ လေ့လာခြင်းနှင့် မှတ်ဉာဏ်
အိပ်စက်မှုဟာ ဦးနှောက်ကနေ မှတ်ဉာဏ်ဆီကို သတင်းအချက်အလက် အသစ်တွေ ပို့ပေးနိုင်အောင် ကူညီပါတယ်။ စာမေးပွဲ၊ အလုပ်အသစ်စတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတခုခုမလုပ်ခင် ညမှာကောင်းကော...င်း အိပ်စက်ထားသူတွေဟာ ညမှာ အိပ်ရေးမဝထားသူတွေထက် ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်မှုတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုများစွာက တစ်ညလုံး အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပြီးတဲ့အခါ လူတွေမှာ ပြဿနာ ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ စွမ်းအားသစ်နဲ့ အမြင်သစ်တွေ ရရှိအောင်မြင်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
အကြာကြီးအိပ်ပျက်တာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်သိုလှောင်မှု
များခြင်းနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းကော်တီဇုန်း ထွက်ရှိမှုများခြင်းကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်မြင့်တက် စေနိုင်ပါတယ်။ ကော်တီဇုန်းဟော်မုန်းများတာဟာ ဝမ်းဗိုက် အဆီများခြင်းနဲ့လည်း ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်ရင် ဆာလောင်မှု ဖိနှိပ်ပေးတဲ့ Leptin ဟော်မုန်းနည်းသွားပြီး ဆာလောင်မှုဖြစ်စေတဲ့ Ghrelin ဟော်မုန်းအထွက်များစေတဲ့အတွက် ပိုစားဖြစ်တာပါ။
ကြာရှည်အိပ်ရေးပျက်ခြင်းနဲ့ ခဏတာအိပ်ရေးပျက်ခြင်းတွေဟာ စိတ်မရှည်မှု၊ ဒေါသ၊ အာရုံစူးစိုက်အားနည်းခြင်း၊ စိတ်တိုစိတ်ဆတ်ခြင်း စတာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ အချိန်မဖြုန်းချင်ရင် အိပ်စက်အနားယူသင့်ပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တာဟာ ပင်ပန်းစေသလို အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်တာက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တာများလို့ ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကျရင် အအေးမိခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း၊ တုပ်ကွေးကွေးခြင်း စတာတွေ ဖြစ်လွယ်တတ်ပါတယ်။
၅။ နှလုံးနှင့် အဆုတ်ကျန်းမာရေး
အကြာကြီး အိပ်ရေးပျက်တာက နှလုံးနဲ့ အဆုတ်ကျန်းမာရေးအပေါ် ဘယ်လောက်များများ ထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာ အတိအကျတော့ မသိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အိပ်ရေးပျက်တာများရင် သွေးဖိအားမြင့်တက်ခြင်းနဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်း ပုံမမှန်ခြင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းများခြင်းနဲ့ ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စေပြီး ဒီအကြောင်းရင်း နှစ်ချက်ဟာ နှလုံးရောဂါထခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။
အိပ်ရေးဝတာဟာ မတော်တဆ ထိခိုက်မှု ဘေးအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်ပါများရင် သတိ လစ်ဟင်းမှုတွေ ဖြစ်လာပြီး လိမ့်ကျခြင်း၊ လဲကျခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းနဲ့ မတော်တဆ ထိခိုက်မှုတွေ အဖြစ်များ ပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝခြင်းနဲ့ အိပ်ငိုက်ခြင်းတို့ကြောင့် နှစ်စဉ် အမေရိကန်မှာ ယာဉ်တိုက်မှုပေါင်း တစ်သိန်းကျော် ဖြစ်ပွားနေကြောင်း အမျိုးသားအဝေးပြေးယာဉ် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းက ဆိုပါတယ်။
Posted by lin linn at 6:58 AM
အရမ်းကောင်းတဲ့ သင်ခန်းစာလေးမို့လို့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖတ်ဖြစ်စေချင်လို့ တင်လိုက်ပါတယ်နော်.......
တစ်ခါတုန်းက အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တစ်ဦးဟာ စာသင်ခန်းထဲမှာ အတွေးအခေါ်ပညာရပ်တွေ ဟောပြောဖို့ရောက်ရှိနေတယ် ။ သူ့ရှေ့ကစားပွဲပေါ်မှာ ပစ္စည်းအချို့တင်ထားပြီး သူ မတ်တပ်ရပ်လိုက်တယ် ။ စကားတစ်ခွန်းမှမပြောပဲ ပထမဆုံးသူ အလွန်ကြီးတဲ့ ဖန်ခွက်တစ်ခွက်ကို ယူလိုက်ပြီး အထဲကို ကျောက်တုံးခပ်ကြီးကြီးတွေဖြည့်လိုက်တယ် ။
ပြီးတော့ သူ့တပည့်တွေကို ဖန်ခွက်ပြည့်ပြီလားလို့မေးလိုက်တယ် ။ အကုန်လုံးက ပြည့်ပါပြီ လို့ပြန်ဖြေတယ် ။
ပြီးတော့ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ဟာ ကျောက်စရပ်ခဲထည့်ထားတဲ့ခွက်ကလေးကိုယူပြီး ဖန်ခွက်ထဲ လောင်းထည့်လိုက်ပြန်တယ် ။ ပြီးတော့ သူဟာ ဖန်ခွက်ကို ဖြေးဖြေးချင်းလှုပ်လိုက်တယ် ။ ကျောက်စရစ်ခဲလေးတွေဟာ နေရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားက နေရာလွတ်လေးတွေဆီ လိမ့်ဝင်သွားခဲ့တယ် ။
သူ့တပည့်တွေကို နောက်ထပ်ဖန်ခွက်ပြည့်ပြီလားလို့ မေးပြန်တယ် ။ အကုန်လုံးက ပြည့်ပါပြီလို့ပြန်ဖြေတယ် ။
အတွေးအခေါ်ပညာရှင်က သဲတွေထည့်ထားတဲ့ခွက်ကလေးကိုယူပြီးဖန်ခွက်ထဲလောင်းထည့်လိုက်ပြန်တယ် ။ သဲတွေဟာ ကျောက်စရစ်ခဲ ကြားလေးတွေကနေ တိုးဝင်သွားပြီးဖန်ခွက်တစ်ခုလုံးပြည့်သွားခဲ့တယ် ။
ပြီးတော့ သူ့တပည့်တွေကို ဖန်ခွက်ပြည့်ပြီလားလို့ မေးပြန်တယ် ။ ကျောင်းသားတွေကလည်း ထုံးစံအတိုင်းပြည့်ပါပြီလို့ ပြန်ဖြေခဲ့တယ် ။
အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကပြောတယ် ။ ` အခု ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ကို ပြောချင်တာကတော့---
ဒီဖန်ခွက်ကလေးကို ခင်ဗျားတို့ ဘ၀ နဲ့ ကိုယ်စားပြုချင်တာပါပဲ
ကျောက်တုံးအကြီးကြီးတွေက ဘ၀ရဲ့ အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တယ် -- ခင်ဗျားတို့ မိသားစု ခင်ပွန်း ဇနီး ကျန်းမာရေး ခင်ဗျားတို့ကလေးတွေ အစရှိသဖြင့်ပေါ့ အကယ်၍ အဲဒီထဲက တချို့အရာတွေ ဆုံးရှုံးသွားတာတောင်မှ ခင်ဗျားရဲ့ ဘ၀ဟာ ပြည့် နေတုန်းပဲ
ကျောက်စရစ်ခဲလေးတွေကတော့ ခင်ဗျားရဲ့ အလုပ် ၊ အိမ် ၊ ကား အဲဒါတွေကို ကိုယ်စားပြုတယ်---သဲတွေကတော့ အရာအားလုံးပါပဲ သေးငယ်တဲ့အရာအားလုံးကိုရည်ညွှန်းပါတယ် ´
ပြီးတော့ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကဆက်ပြောတယ် ။
` အကယ်၍ ဖန်ခွက်ထဲကို သဲတွေသာ အရင်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျောက်စရစ်ခဲတွေ ကျောက်တုံးတွေအတွက် နေရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး -- ဒါဟာ ဘ၀ နဲ့ အတူတူပါပဲ -- အကယ်၍ ခင်ဗျားတို့ဟာ သေးငယ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကိစ္စတွေအတွက်နဲ့ ခင်ဗျားအချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးစေမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျား ဘ၀အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေထည့်ဖို့ ခင်ဗျား ဘ၀မှာ အခန်းလွတ်တွေမရှိတော့ပါဘူး -- ခင်ဗျားရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအစစ်အမှန်ကို ပေးစေတဲ့အရာတွေကို အာရုံစိုက်ပါ ခင်ဗျားရဲ့ ကလေးတွေနဲ့ဆော့ကစားပါ ခင်ပွန်း ၊ ဇနီးကို လက်တွဲပြီးလျှောက်လည်ပါ အလုပ်ကိုကြိုးစားပါ အိမ်ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ ညစာစားပွဲလေးကျင်းပပါ ´
` ကျောက်တုံးကျောက်ခဲနဲ့တူတဲ့ အရာတွေကို အရင်ဆုံးခင်ဗျားဘ၀ထဲကို လောင်းထည့်ပါ ဒုတိယအနေနဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲနဲ့တူတဲ့အရာတွေကို လောင်းထည့်လိုက်ပါ ဘာကို ဦးစားပေးရမလဲဆိုတဲ့ Priorities ကို စဉ်းစားပါ ကျန်တာတွေကတော့ သဲပွင့်တွေချည်းပါပဲ ။
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဥပမာပေးလေးပါပဲ ။ ကျောက်တုံးတွေနဲ့တူတဲ့ မိဘ ၊ ခင်ပွန်း ၊ ကျန်းမာရေး ၊ မိသားစု စတဲ့အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပထမဦးစားပေးသတ်မှတ်ရပါလိမ့်မယ် ။ ကျောက်စရစ်ခဲနဲ့တူတဲ့ အလုပ်၊ အိမ် ၊ ကား စတာတွေကိုတော့ ဒုတိယအဆင့်မှာပဲထားရပါလိမ့်မယ် ။ ကျန်တာတွေကတော့ သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ သဲပွင့်လေးတွေပါပဲ ။ ကျွန်တော်တို့အများစုဟာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ မစဉ်းစားကြပဲ သဲပွင့်တွေ ကျောက်စရစ်ခဲတွေကို ဘ၀ဆိုတဲ့ ဖန်ခွက်ကြီးထဲ လောင်းထည့်နေမိကြတယ် ။ အဲဒီအခါ ဖန်ခွက်ကပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ်အရေးကြီးတဲ့ ကျောက်တုံးနဲ့တူတဲ့အရာတွေ ထပ်မထည့်နိုင်တော့ပါဘူး ။ အားလုံးပဲ ဘ၀ကို ဖြတ်သန်းတဲ့အခါ အထက်ပါ ဥပမာလေးကို သင်ခန်းစာယူကြပါစို့ ။
Posted by lin linn at 6:56 AM
နယူးယော့ခ်မြို့မှ ထာဝရမီးတောက်တည်ရှိမှု ပဟေဋ္ဌိဖြစ်နေဆဲ
ရေတံခွန်ငယ် တစ်ခုအောက်တွင် တောက်လောင်နေပြီး ငြိမ်းသွားခြင်း မရှိသော မီးတောက်ငယ်သည် နယူးယော့ခ်တွင် အမှတ်တရ နေရာလေး တစ်ခုအဖြစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း ခံထားရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယော့ခ်မြို့တွင် တည်ရှိနေသည့် လူသိများသော ထာဝရမီးတောက်နှင့် ပတ်သက်သည့် ဖြစ်တည်မှုကို သုတေသီများ အဖြေမထုတ်နိုင်ဘဲ ခေါင်းစားနေကြောင်း သိရှိရသည်။ ရေတံခွန်ငယ် တစ်ခုအောက်တွင် တောက်လောင်နေပြီး ငြိမ်းသွားခြင်း မရှိသော မီးတောက်ငယ်သည် နယူးယော့ခ်တွင် အမှတ်တရ နေရာလေး တစ်ခုအဖြစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း ခံထားရသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် မီးမငြိမ်းဘဲ တောက်လောင်နေသည့် မီးတောက်အများအပြား ရှိနေသော်လည်း ယင်းတို့အနက် အများစုကိ...ု လူများက ဖန်တီးကာ မီးမငြိမ်းအောင် လောင်စာ ဖြည့်တင်းပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးကို ဂုဏ်ပြုသည့် အခြေအနေမျိုးတွင် မသေသော မီးတောက်များကို ဖန်တီးလေ့ ရှိသည်။
သို့သော်လည်း ချက်စတန့်ရစ်ဂ်ျကောင်တီ ဥယျာဉ်အတွင်းမှ မီးတောက်လေးမှာ ထူးခြားလျှက် ရှိသည်။ သုတေသီများက သဘာဝ မီးတောက်များသည် အလွန်ပူလောင်သော ကျောက်တုံးများမှ စိမ့်ထွက်နေသည့် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လေ့ ရှိကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ မီးတောက်ငယ်ကို အောက်ခံပြုထားသော ကျောက်တုံးများမှာမူ လုံလောက်သည့် ပူပြင်းမှု မရှိဟု ဆိုသည်။ အလွန်မပူသည့် ကျောက်တုံးများတွင် လက်ရှိ မီးတောက်၏ ပမာဏ အတိုင်းအထွာဖြင့် တောက်လောင်နေမှုသည် ပဟေဠိ ဆန်လွန်းသည့် မသိကိန်း တစ်ခုအဖြစ် သုတေသီများက ဝန်ခံထားသည်။
ပညာရှင်များသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ၎င်းတို့ ယုံကြည်ထားသည့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု သီအိုရီကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းနေခြင်းဆိုသော ကောက်ချက် မှားယွင်းသွားမှန်း သိရှိလာပြီးနောက် အခြား အကြောင်းရင်း တစ်ခုကို အဖြေရှာနိုင်ရန် မျှော်လင့်နေသည်။ နယူးယော့ခ် အနောက်ပိုင်းရှိ မီးတောက်ငယ်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ထောင်ချီ ကာလကတည်းက တည်ရှိခဲ့ကြောင်း ပါးစပ်ရာဇဝင်များလည်း ထွက်ပေါ်နေသည်။ ထိုစဉ်က အမေရိက တိုင်းရင်းအနွယ်များက မီးတောက်ကို စပျိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အင်ဒီယားနား တက္ကသိုလ်မှ ပရော်ဖက်ဆာ အန့်ဒ်ရှာမဲလ်မန်းနှင့် အခြားသော သုတေသီများသည် မီးတောက်၏ သဘာဝကို လေ့လာရာမှ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ကြောင့် လောင်ကျွမ်းနေခြင်းဟု ကောက်ချက် မချနိုင်ကြောင်း ဖော်ထုတ်လာနိုင်ခဲ့သည်။
"တစ်ခု တွေးမိတာက ဒီနေရာမှာ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုက တခြားနေရာတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်တည်နေသလား ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်ပဲ မှန်ကန်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့ တခြားနေရာတွေမှာလည်း လက်ရှိ သီအိုရီနဲ့ ကွဲလွဲတဲ့ ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှတ်မှုတွေ ရှိနေမယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိ ယူဆထားတဲ့ နုန်းကျောက်လွှာ ဓာတ်ငွေ့သိုက်တွေထက် ပိုများတာတွေကို ဖော်ထုတ်လာနိုင်တယ်"ဟု ရှာမဲလ်မန်းက ပြောကြားသွားသည်။ ၎င်းတို့ သုတေသီ အဖွဲ့သည် ပဟေဠိဆန်သော တွေ့ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေလထုတ် Marine and Petroleum Geology ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်
Posted by lin linn at 6:52 AM
ရခိုင်ပြည်အနံ NLD ရုံးများရုပ်သိမ်းပေးရန်ရခိုင်လ
ရခိုင်ပြည်အနံ ဖွင်လှမ်းထားသွာ အမျိုးသား NLD အား ရခိုင်ပြည်မှ အပြီးပိုင်ဖျက်သိမ်းသွားရန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရခိုင်မျိုးချစ်လူငယ်များအသင်းမှသိရပါသည်။ကျွန်တော်တိုကဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးဗျာဘာသာမပျောက်ရအောင်ငါတိုလူငယ်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်..ဘင်္ဂလီ ကုလားတွေကို အားပေးနေတယ် NLD ပါတိ ကို ကျွန်တော်တိုလူမျိုးတွေ လက်မခံနှိင်ပါNLDကခေါင်းဆောင် တွေ..ကုလားသားဖောက်နှုန်းတွေကိုမထိန်းချုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ ဘင်္ဂလီကုလားတွေကို မြန်မာနှိင်ငံ အနံသွားလာခွင် တားမြတ်ထားတာ လူအခွင်အရေးချိုးဖေါက်မူဖြစ်တဲ့အတွက် တားမြတ်ခွင်ကိုပိုတ်ပင်ပေးဖို့ (ကုလားတွေကိုမြန်မာအနံနေထိုင်ခွင်ပေးဖို့ )လိုပါတယ်…
ယခင်ကပင် ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့သည့် လူဦးရေ ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အမိန့်ဖြစ်ပြီး ယင်းအမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်းကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ရာ မရောက်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် မှတ်တမ်းစုဆောင်းရေး ဆပ်ကော်မတီ များ ပြောထားပြီးဖြစ်သည်။
Posted by lin linn at 7:18 AM
Samsung Galaxy S4 ၏ အကောင်းဆုံးနှင့် အထူးခြားဆုံး စွမ်းရည်များ
အသစ် ထွက်ရှိလာတဲ့ Samsung Galaxy S4 ဆိုတာ Android စမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း HTC One နဲ့ ပခုံးခြင်းယှဉ်ပြီး နံပါတ် ၁ နေရာကို လုနေတာပါ။
မူရင်း Android OS ကို ပြုပြင်ထားတဲ့ Samsung ရဲ့ User Interface (UI) နဲ့ ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Samsung မူပိုင် app တွေအပြင် ဒီ Galaxy S4 ဟာ လွန်စွာထူးခြား ကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ ထိတွေ့မှုဖြင့် ထိန်းချုပ် လုပ်ဆောင်ချက် (gestures) ၊ လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ထိန်းချုပ် လုပ်ဆောင်ချက် (motion control) နှင့် အသံဖြင့် ထိန်းချုပ် လုပ်ဆောင်ချက် (voice command) စသည်တို့ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
Samsung အနေနဲ့ အထက်ပါ ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်နည်း ၃ ခုကို ဖန်တီးထားမှုအပိုင်းမှာ Apple ကော HTC ကိုပါ အဝေးမှာ ချန်ထားနိုင်ခဲ့ပြီ လို့တောင်ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူတွေ အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်အောင်လည်း အသေးစိတ် ရှင်းပြမှုတွေကို လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းအတွက် ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
သို့သော်လည်း အချို့သော စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက အသေအချာ ရှာဖွေမှသာ တွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး နည်းပညာပိုင်း အတန်အသင့် ကျွမ်းကျင်ဖို့လည်း လိုပါလိမ့်မယ်။ အခု ဆက်လက်ဖော်ပြ သွားမှာကတော့ Galaxy S4 ရဲ့ အထူးခြားဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်များနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များကို စားသုံးသူတို့ အလွယ်တကူ သိရှိ အသုံးပြုနိုင်မယ့် နည်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိတွေ့မှု ၊ လှုပ်ရှားမှု နှင့် အသံဖြင့် ထိန်းချုပ် လုပ်ဆောင်ချက်များ
Air Gesture : ထိတွေ့မှုသုံး မျက်နှာပြင်ပါတဲ့ စမတ်ဖုန်းကို ထိတွေ့စရာ မလိုပဲ ဝှေ့ယမ်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ထိန်ချုပ်လို့ ရတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားစရာပါ။ “What good is your touchscreen phone when you don’t need to touch it anymore.” လို့တောင် နောက်ပြောင်နေကြပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့လည်း အထက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒီ ဝှေ့ယမ်းလှုပ်ရှားမှုဖြင့် ထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်ချက်အား ကျော်သွားမယ် ဆိုရင်တော့ မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ အစပိုင်းမှာ နည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်လို့ ခံစားရနိုင်ပေမယ့် ဖုန်းကိုင်ဖို့တို့ စပီကာဖွင့်တာတို့ အီးမေးလ်ကြည့်တာတို့ကို လက်လေးဝှေ့ယမ်းလိုက်တာနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာ လွန်စွာမှကို လန်း တဲ့ အချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ရှုရာမှာလည်း လက်ဖြင့် ဝှေ့ယမ်းကာ နောက်တစ်ပုံသို့ ပြောင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Motion Control : လှုပ်ရှားမှုသုံး လုပ်ဆောင်ချက် နောက်တစ်ခုကတော့ Motion Control ဖြစ်ပြီး Galaxy S4 ကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ် လှုပ်ရှားလဲပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဖန်တီးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဖုန်းအသံပိတ်ဖြင့် ဖုန်းကို မှောက်လိုက်ရုံနဲ့ရသလို မိမိဖုန်းခေါ်လိုသူ၏ ဖုန်းနံပါတ်အား Contact ထဲ၌ ရှာဖွေပြီး ဖုန်းအား နားသို့ ကပ်လိုက်ပါက အလိုအလျောက် ဖုန်းခေါ်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
S Voice Drive : Apple ရဲ့ Siri ရဲ့ မဟာပြိုင်ဖက် တစ်ဖြစ်လဲ Samsung ရဲ့ ဒီဂျစ်တယ် ကိုယ်ရေးအရာရှိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Smart Settings (သို့) အလိုရှိရာ setting များအား ကြိုတင် သတ်မှတ်ထားခြင်း
Wi-Fi Smart Mode : ဖုန်းကွန်ယက်ကနေ့ Wi-Fi ကို အလိုအလျေက် ပြောင်းလဲချိတ်ဆက်ပြီး Wi-Fi ပေါ်ကနေ ဖုန်းခေါ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Smart Screen : Galaxy S3 မှာ ပါဝင်လာတဲ့ Smart Stay (သို့) ဖုန်းအသုံးပြုသူ၏ အမူအရာအား သိရှိနားလည်မှုဆိုတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို လူတွေ အတော်လေးကို နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ သင်ဖုန်းကို ကြည့်နေသ၍ ဖုန်းပိတ်မသွားခြင်းဟာ Smart Stay ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခု S4 မှာတော့ တစ်ဆင့်မြင့်ပြီး အသုံးပြုသူရဲ့ မျက်လုံး၏ အမူအရာအပေါ်မူတည်ပြီး စာဖတ်ရာတွင် စာမျက်နှာ အပေါ်၊ အောက် အတက်အဆင်း ပြုလုပ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ဖုန်းမျက်နှာပြင် အနေအထားကိုလည်း portrait မှ landscape သို့ ပြောင်းလဲမှုအား ရပ်တန့်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Android OS အား အဆင့်မြှင့်တင် ထားမှုများ
Android OS ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ထားတဲ့ Custom UI မှာတော့ Notification Panel နှင့် Keyboard တို့မှာ လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်အချို့ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Keyboard မှာ ပါဝင်တဲ့ Swiftkey ကို အဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်။
နောက်ထပ် ထူးခြားတဲ့ အချက်တစ်ခုကတော့ Multiwindow ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၅ လက်မ နီးပါးရှိပြီး အရွယ်အစား ကြီးမားတဲ့ Galaxy S4 ရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို ၂ ခြမ်းစိတ်ပြီး အလုပ် ၂ မျိုး တစ်ပြိုင်နက် လုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို app အများအပြားမှာ မလုပ်ဆောင်နိုင် သေးပါဘူး။
Samsung ၏ မူပိုင် App များ
Optical Reader : အမြင်အာရုံဖြင့် ဖတ်ရှုမှု နည်းပညာလို့ တိုက်ရိုက်ဘာသာ ပြန်လိုက်ရင် ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ Optical Reader ခေါ် ဖုန်းကင်မရာကနေတဆင့် စာလုံးများကို scan လုပ်ပြီး text အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာက လွန်စွာထူးခြားပါတယ်။ ဖတ်ရှုနေတဲ့ စာလုံးတွေကိုလည်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အပါအဝင် အခြာဘာသာစကား တစ်ဒါဇင်လောက်ကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ဘာသာပြန်ပေး နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါအပြင့် barcode တွေကိုလည်း ဖတ်ရှုနိုင်စွမ်း ရှိတာကြောင့် သင့်အနေနဲ့ app တစ်ခုသီးသန့် download လုပ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
S Translator : သင့်အနေနဲ့ ဘာသာစကားသစ် သင်နေတယ်။ ဒါမမဟုတ် ခရီးသွားနေတယ် ဆိုရင်တော့ ဒီ S Translator ဟာ လွန်စွာမှကို အသုံးဝင်မယ့် app တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Samsung အနေနဲ့ S Translator ကို ဖန်တီးရာမှာ အင်အား အတော်လေးကို စိုက်ထုတ်ထားလို့ ဒီ app ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကလည်း သင့်ကို အံအားသင့်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
S Translator ကို Android app အတော်များများနဲ့ ပူးပေါင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီ ဘာသာပြန်ခြင်းအား အသံ (သို့) စာသားဖြင့် ပြုလုပ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by lin linn at 3:52 PM
(၁) အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက်နှစ်ဆ-သုံးဆ ပိုပြီး စိတ်အပြောင်းအလဲ မြန်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး အများစုက အမျိုးသားအများစုထက်ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ဖို့ ပိုကြာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားတွေက သူတို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသား အရာတစ်ခုကို ပိုပြီး ပြီးဆုံးအောင် ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိပါတယ်။
(၂) အိုင်ကျူစစ်ဆေးနည်း ခံယူထားတဲ့ သူတွေကိုလေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် အိုင်ကျူအနည်းငယ် ပိုမြင့်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
(၃) အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် မျက်နှာတွေ၊အထူးသဖြင့် အမျိူးသမီးတွေရဲ့ မျက်နှာတွေကို ပိုမိုမှတ်မိတတ်ကြပါတယ်။
(၄) အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေထက် ပိုပြီး ကူညီတတ်ကြပါတယ်။
(၅) အမျိုးသမီးတွေက အလုပ်ကြောင့် ရလာနိုင်တဲ့ ရလဒ်တွေကို ခန့်မှန်းတဲ့အခါမှာ ပိုပြီး အဆိုးမြင်တတ်ကြပါတယ်။
(၆)အမျိုးသမီးအများစုကတချို့အလုပ်ကိစ္စတွေမှာတော်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပေမယ့်အရာရာတိုင်းကို ကောင်းအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါဘူး။
(၇) အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် ပိုပြီး ကြောက်ရွံ့တတ်၊ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်ကြပါတယ်။
(၈) အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက်နှစ်ဆပိုပြီး စကားများကြပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ အမျိုးသားတွေက ပျမ်းမျှအားဖြင့် စကားလုံး ၁၂၅,၀၀ လုံး ပြောကြပြီး အမျိုးသမီးတွေက ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂၅၅,၀၀ လုံးပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။
(၉) အမျိုးသားအများစုက ပျမ်းမျှအားဖြင့် ခုနစ်စက္ကန့်ကြာတိုင်း Sex အကြောင်း စဉ်းစားလေ့ရှိကြပါတယ်။
(၁ဝ) အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ မျက်နှာအမူအရာနဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို အကဲခတ်ရာမှာ ပိုပါးနပ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေက မိန်းမတွေရဲ့ မျက်ရည်ကို တွေ့တဲ့အခါကျမှ သူတို့လုပ်ရပ် မှားသွားမှန်း တကယ် သဘောပေါက်သွားတယ်လို့ တချို့ အမျိုးသမီးတွေက ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတွေက (အမျိုးသားတွေထက်) နာကျင်ဝမ်းနည်းတဲ့အခါ လေးဆ ပိုပြီး ငိုကြွေးတတ်တာပါ။
Posted by lin linn at 3:47 PM
Thet Ko Oo
(၁) ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို သူမ လှသလားလို့ မေးတော့ ကောင်လေးက “မလှဘူး”လို့ပဲ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ သူမနဲ့အတူ ထာဝရ နေချင်သလားလို့မေးတော့ ကောင်လေးက “မနေချင်ဘူး”လို့ပဲ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူမသာ အဝေးကို ထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင် သူ ငိုမှာလားလို့ မေးလိုက်တော့ ကောင်လေးက “မငိုဘူး”လို့ပဲ ပြန်ဖြေပါတယ်။ ကြားရတာ လုံလောက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူမ အဝေးကိုထွက်ခွာဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။
သူမ အဝေးကို စတင်ထွက်ခွာတဲ့အခါ သူဟာ သူမလက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး ခဏနေပေးဖို့ ပြောဆိုပါတယ်။ သူက ပြောလာပါတယ်။ “မင်းဟာ မလှဘူး။ ချစ်စရာ ကောင်းတာပါ။ ကိုယ် မင်းနဲ့အတူ ထာဝရ မနေချင်ဘူး။ မင်းနဲ့ ထာဝရ အတူရှိနေဖို့ပဲ လိုအပ်တာပါ။ ပြီးတော့ မင်းအဝေးကို ထွက်ခွာသွားတဲ့အခါ ကိုယ် မငိုပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကိုယ် သေသွားနိုင်လို့ပဲ”
(၂) လူတစ်ဦးဟာ ပန်း(၁၂)ပွင့် ဝယ်လာခဲ့တယ်။ (၁၁)ပွင့်က ပန်းအစစ်တွေဖြစ်ပြီး (၁)ပွင့်ကတော့ ပန်းအတုဖြစ်တယ်။ သူက ပြောလာပါတယ်။ “ပန်းအတုလေး ညှိုးနွမ်းသွားတဲ့အချိန်တိုင်အောင် မင်းကို ချစ်နေမယ်”တဲ့။
(၃) တစ်ညမှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်တို့ဟာ ရုပ်ရှင်ရုံကနေ ကားမောင်းပြန်လာကြတယ်။ အဲဒီနေ့ညက သူတို့နှစ်ဦးအကြား နာကျင်ဖွယ် စိမ်းကားအေးစက်နေမှုကြောင့် ကောင်လေးဟာ တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီလို့ နားလည်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကောင်မလေးက စကားပြောချင်သဖြင့် ကားကို လမ်းဘေးရပ်ပေးဖို့ ကောင်လေးကို ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ သူမရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သဖြင့် လမ်းခွဲဖို့ အချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။
ကောင်ကလေးရဲ့ပါးပြင်မှာ မျက်ရည်တစ်စက် တိတ်တဆိတ် ကျဆင်းလာတယ်။ သူဟာ အိတ်ကပ်ထဲ လက်နှိုက်ပြီး ခေါက်ထားတဲ့ စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကို သူမဆီ ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ မူးနေတဲ့ ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်ဟာ သူတို့မောင်းနှင်ရာ လမ်းအတိုင်း ကားမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ညာဘက်ခြမ်း ဒရိုင်ဘာရဲ့ထိုင်ခုံဆီ ကွေ့လိုက်မိတော့ ကောင်ကလေးကို တိုက်မိပြီး ကောင်ကလေး သေဆုံးသွားပါတယ်။
အံ့သြစရာကောင်းတာက ကောင်မလေးဟာ အသက်မသေ ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ စာရွက်လေးကို သူမ သတိရမိတဲ့အခါ ထုတ်ယူပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ “မင်းရဲ့ မေတ္တာကိုသာ မရဘူးဆိုရင် ကိုယ် သေသွားနိုင်တယ်”တဲ့။
(၄) ဘက်ကာ အမည်ရှိ ကောင်မလေးနဲ့ ဂျိုး အမည်ရှိ ကောင်လေးတစ်ယောက်တို့ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ဘက်ကာဟာ မီးလောင်နေတဲ့ အိမ်တစ်လုံးထဲ ရောက်နေတယ်။ မီးဟာ အလွန်အမင်း တောက်လောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ် မီးသတ်သမားမှ အိမ်ထဲ မဝင်ရဲပါဘူး။ ဂျိုးဟာ မီးသတ်ဝတ်စုံတစ်စုံ ကောက်ဝတ်ပြီး အိမ်ထဲ ဝင်လိုက်တယ်။ လှေကားပေါ် သူ တက်လိုက်တဲ့အခါ သူ့အောက်က လှေကားထစ်တွေ ပြုတ်ကျကုန်တယ်။ သူမအခန်းထဲ သူရောက်တဲ့အခါ သူ့နောက်က တံခါးကို အသေပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ သူဟာ သူမကို တင်းကြပ်စွာဖက်၊ အနမ်းပေးပြီးနောက် သူမကိုချစ်ကြောင်း ပြောဆိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်နေလို့လဲလို့ သူမကမေးတော့ သူ သေတော့မှာလို့ ဖြေလိုက်ပါတယ်။ သူမ မျက်လုံးတွေ ပြူးကျယ်ဝိုင်းစက်သွားပြီး ငိုရှိုက်ပါတော့တယ်။ သူဟာ သူမကို ပွေ့ချီလိုက်ပြီး လေးထပ်တိုက်ပေါ်က ခုန်ချလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးကို သူ့အပေါ်ထားပြီး သူ့ကျောနဲ့ မြေပြင်ပေါ် ကျသွားပါတယ်။ သူမဘဝကို ကယ်ဆယ်ဖို့အတွက် သူ သေသွားခဲ့ရတယ်။
(၅) တစ်ခါက ကောင်မလေးဟာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို အလွန်ချစ်နေတဲ့အတွက် မေးလိုက်ပါတယ်။ “ကျွန်မ ရှင့်ကို ကြိုက်တယ်လို့ပြောရင် ရှင် ပျက်လုံးတစ်ခုလို့ သဘောထားမှာလား”
“ဟုတ်တယ်။ ကိုယ် ပျက်လုံးလို့ သဘောထားမှာပေါ့”လို့ ကောင်လေးက ဖြေလိုက်တယ်။
“ဘာကြောင့်လဲ”လို့ သူမက မေးတယ်။
“မင်းဟာ ကိုယ့်ကို ကြိုက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အပေါ် မေတ္တာရှိနေတယ်ဆိုတာ သိနေလို့ပေါ့ကွာ”လို့ ကောင်ကလေးက ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
(၆) ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်တို့ဟာ တစ်နာရီ (၁၀၀)မိုင်နှုန်း အကျော်ဖြင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို စီးနေကြပါတယ်။
ကောင်မလေး။ ။အရှိန်လျှော့ပါဦး။ ကျွန်မ ကြောက်လို့ပါ။
ကောင်ကလေး။ ။မလျှော့ချင်ဘူး။ ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်ကွာ။
ကောင်မလေး။ ။ပျော်စရာ မကောင်းပါဘူး။ အတော် ကြောက်စရာ ကောင်းတယ်ရှင့်။
ကောင်ကလေး။ ။ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ကို ချစ်တယ်လို့ပြောလေ။
ကောင်မလေး။ ။ကောင်းပါပြီ… ကျွန်မ ရှင့်ကို ချစ်တယ်။ အရှိန်လျှော့တော့လေ။
ကောင်လေး။ ။ခု ကိုယ့်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ဖက်ထားလိုက်။ (ကောင်မလေးက ကောင်လေးကို ဖက်လိုက်တယ်။)
ကောင်လေး။ ။ကိုယ့်ခေါင်းက ဦးထုပ်ဖြုတ်ယူပြီး မင်းပဲ ဆောင်းလိုက်ပါလား။ ဒီဦးထုပ်က ကိုယ့်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတယ်။
မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စင်းဟာ ဘရိတ်ကျိုးပေါက်မှုကြောင့် အဆောက်အဦးတစ်ခုကို ဝင်တိုက်မိသွားပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှာ လူနှစ်ဦးပါရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဦးပဲ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်တယ်။
တကယ်တော့ အဆင်းလမ်းတစ်ဝက်မှာ ကောင်ကလေးဟာ ဘရိတ်ကျိုးပေါက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိလာပေမယ့် ကောင်မလေးကိုတော့ မသိစေချင်မိပါဘူး။ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ သူ့ကိုချစ်ကြောင်း ပြောခိုင်းပြီး ကောင်မလေးရဲ့ သိုင်းဖက်မှုကို ခံလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူ သေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် ကောင်မလေး မသေဆုံးစေဖို့အတွက် သူမကို သူရဲ့ဦးထုပ် ဆောင်းခိုင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Ref; Romantic Love Message by Unknown Author
Posted by lin linn at 8:00 AM
တစ်ခါတုန်းက သဋ္ဌေးကြီး တစ်ယောက်ရှိသတဲ့။ သူက မိကျောင်းတွေမွေးရတာကို ၀ါသနာထုံလေတော့ သူ့အိမ်မှာ ရေကန်ကြီးတူးပြီး မိကျောင်းတွေ မွေးထားလေသတဲ့။
သဋ္ဌေးကြီးမှာက သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိလေသတဲ့။ တစ်နေ့တော့ သူ့အိမ်မှာ ပါတီ အကြီးကြီးတစ်ခုလုပ်ပြီး သဋ္ဌေးကြီးက ကြေငြာသတဲ့။ အခု ပါတီမှာ ရှိနေတဲ့ ယောင်္ကျားလေးများ ဟော့ဒီက မိကျောင်းအပြည့်ရေကန်ကြီးထဲကို ဖြတ်ကူးနိုင်တဲ့လူကို ငွေတစ်သန်းဖြစ်ဖြစ် ငါ့သမီးဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်တာကို ရွေးချယ်ခွင့်ပြုမယ်။
သူ့စကားဆုံးတာနဲ့ “ဗွမ်း” ဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်ရပြီး လူရွယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ ဒရောသောပါး ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ ရေကန်ကို အသည်းအသန်ကို ဖြတ်ကူးနေလေသတဲ့။
သဋ္ဌေးကြီးလည်း အံသြသွားတာပေ့ါ။ ပါတီကလူတွေကလည်း လူငယ်လေးကို လက်ခုပ်တွေ တီးပြီးတော့ အားပေးကြတာပေါ့။ အဲ့ဒီလိုနဲက နောက်ဆုံးမှာ လူငယ်ကလေးဟာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ အနည်းငယ်ရတာကလွဲလို့ အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပဲ မိကျောင်းအပြည့်နဲ့ ရေကန်ကြီးကို ဖြတ်ကူးလာနိုင်သတဲ့။
သဋ္ဌေကြီးက ပြောသတဲ့ “မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုပဲ တယ်ရဲ့ရင်တဲ့ သူငယ်ပဲ။ ကဲကဲ ကျုပ်ရဲ့ ကတိအတိုင်း မောင်ရင် ကျုပ်သမီးကို ယူမလား၊ ငွေတစ်သန်းကို ယူမလား ကြိုက်ရာရွေးပေတော့”
အဲ့ဒီမှာတင်လူငယ်က ဒေါသတကြီးနဲ့ “ဒီမှာ နားထောင်၊ ကျုပ်ခင်ဗျား သမီးကိုလည်း မလိုချင်ဘူး၊ ငွေတစ်သန်းလည်း မလိုချင်ဘူး။ သိချင်တာ တစ်ခုဘဲရှိတယ်။ ဘယ်သကောင့်သားက အားယားပြီး ကျုပ်ကို ဒီကန်ထဲကို တွန်းချလိုက်တာလဲ”
Posted by lin linn at 7:55 AM
Laptop အသုံးပြုသူတွေဟာ Laptop အပူလွန်ကဲမှုအတွက် အမြဲတမ်းပူပန်နေကြရပါတယ်... Laptop တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်နိုင်မှသာလျှင် တာရှည်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်... Laptop အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ၉၀ % နီးပါးဟာ အပူလွန်ကဲမှုပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်... အပူလွန်ကဲမှုကြောင့် laptop ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေချို့ယွင်းပြီး အတွင်းပိုင်းစက်ပစ္စည်းတွေလည်း ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်... သင့်ရဲ့ laptop အပူလွန်ကဲမှုမဖြစ်အောင်နဲ့ အေးမြမှုကို တတ်နိုင်သလောက် ထိန်းထားနိုင်မယ့်နည်းလမ်းလေးတွေကို ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးပေးသွားပါ့မယ်...
၁) Power Setting
သာမန်အားဖြင့် laptop တွေကိုသုံးနေတုန်းအားသွင်းထားတတ်ကြပြီး mode ကိုလည်း High performance မှာထားတတ်ကြပါတယ်... ဒီ setting ကြောင့် laptop ဟာ power ကိုပိုပြီးအသုံးပြုတဲ့အတွက် အပူလွန်ကဲမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်... ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းကတော့ သင့် laptop ကို balanced ဒါမှမဟုတ် power saver mode မှာထားဖို့ပါပဲ... ဒီလိုထားလိုက်ခြင်းအားဖြင့် power ကို လိုသလောက်သာ အသုံးပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်...
ဖုန်ထူတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ laptop တွေကိုအသုံးပြုရင် အအေးပေးစနစ် (ပန်ကာ) တွေထဲကို ဖုန်တွေဝင်ပြီး ပိတ်ဆို့စေပါတယ်... ဒီအခြေအနေဟာ ပန်ကာတွေကို မြင့်မားတဲ့အပူချိန်မှာ ဝန်ပိတာမျိုးဖြစ်စေပါတယ်... ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက် လေမှုတ်ကိရိယာတစ်ခုနဲ့ သင့် laptop ရဲ့ လေဝင်လေထွက်စနစ်တွေကို မှုတ်ပေးရပါမယ်... ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဖုန်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီး သင့် laptop ကို ဆက်လက်အေးမြစေနိုင်ပါတယ်...
သာမန်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ laptop တွေကို ခေါင်းအုံးပေါ် ဒါမှမဟုတ် ကော်ဇော/အိပ်ယာခင်းပေါ်တင်ပြီးသုံးတတ်ကြပါတယ်.. ဒီလိုသုံးတာဟာ အလုပ်လုပ်ရာမှာ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါတယ်... ဒါပေမဲ့ ဒီလိုသုံးတာဟာ laptop ရဲ့ လေဝင်လေထွက်စနစ်တွေကို ပိတ်ဆို့ပြီး အပူလွန်ကဲမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကို တော်တော်များများက မသိကြပါဘူး... ပျော့ပြောင်းတဲ့မျက်နှာပြင်တွေဟာ အပူကို စွန့်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အတွင်းပိုင်းစက်အစိတ်အပိုင်းတွေဆီကို အပူပြန်ဟပ်စေနိုင်ပါတယ်... Laptop တင်ဖို့ အသင့်လျော်ဆုံးမျက်နှာပြင်ကတော့ ပြားပြီးမာတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေပါပဲ... စားပွဲလိုမျိုးပေါ့... ဒီလိုမျက်နှာပြင်တွေကသာ လေနဲ့အပူတွေကို စွန့်ထုတ်ဖို့အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်...
၄) Cooling Pad
Coling Pad တွေဟာလည်း သင့် laptop ရဲ့ အပူလွန်ကဲမှုအတွက် သင့်လျော်တဲ့ ကုထုံးတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်... ဒါတွေကိုဝယ်ရတဲ့အတွက် ငွေနည်းနည်းတော့ သင်ကုန်ပါလိမ့်မယ်... ဒါပေမဲ့ သင့်မှာ အပူလွန်ကဲမှု ပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအတွက် ကုန်ရကျိုးနပ်ပါတယ်...
၅) Laptop power ပိတ်ခြင်း
သင် laptop နဲ့ အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ standby မှာထားမယ့်အစား ပိတ်ထားသင့်ပါတယ်... Hibernate option ကိုလည်း သုံးနိုင်ပေမဲ့ restart ပြန်လုပ်တဲ့အခါ ပြဿနာတစ်ချို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်... အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ အသုံးမလိုရင် ပိတ်ထားတာပါပဲ...
Ref: Computer & Mobile (٠ Hacking Tips & Trick ٠)
Posted by lin linn at 7:38 AM
၂။ အချိန်ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း - ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက လိုအပ်တဲ့အချိန်ကို ရယူနိုင်ရန်လေ့ကျင့်ထားပါ၊ မလိုလားအပ်သော နေရာများတွင် အေ...ကြာင်းမဲ့ အချိန်မဖြုန်းပါနှင့်။
Posted by lin linn at 7:36 AM
၁။ကြိုးစား၍ရှုံးရသည်မှာ ရှက်စရာမဟုတ်၊ရှုံးမည်ကို ကြောက်၍မကြိုးစားခြင်းကသာ ရှက်စရာဖြစ်တယ်။
၂။အချစ်ကိုတော့နှလုံးသားနဲ့ချစ်၊ ဘ၀ကိုတော့ ဦးနှောက်နဲ့ပါတွက်။
၄။ပျင်းရိခြင်းနဲ့ ရောင့်ရဲခြင်းဟာ လုံးဝမတူပါဘူး။
၅။နှလုံးသားမှာစည်းမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အသိစိတ်တံတိုင်းနဲ့တော့ကန့်သတ်ထားသင့်တယ်။
၆။စိတ်ပျက်ရင် အကုန်ပျက်ပြီ။ ဘ၀သည်စိတ်ဓာတ်နှင့်သာရပ်တည်နေပါသည်။
၇။မည်မျှဝေးသောခရီးဖြစ်ပါစေ။ ခြေတစ်လှမ်းဖြင့် စတင်လျှောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
၈။မိတ်ဆွေ .... သူတစ်ပါးဂုဏ်သိက္ခာကျသွားမှ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာတက်မှာလား။
၉။ရိုးသားရုံနဲ့မကြီးပွားဘူးနော် .... ကြိုးစားမူလည်ပါဦးမှ။
၁၀။မင်းဘ၀မှာဘယ်အရာက အရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ သိဖို့လိုတယ်။
၁၁။ပိုက်ဆံဆိုတာ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးဖို့ ... ဖြုန်းဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။
၁၃။ရုန်းကန်ခြင်းက ခွန်အားကိုတည်ဆောက်ပေးတယ်နော် ...။
၁၄။အောင်မြင်မှုဆိုတာအချိန်၊နေရာ၊အခြေအနေတွေ မဟုတ်ဘူး။ လူအပေါ်မှာလဲမူတည်တယ်။
၁၆။မင်းသာရိုးသားကြိုးစားစမ်းပါ။ အခွင့်အရေးက အလိုလိုတံခါးလာခေါက်ပါလိမ့်မယ်။
၁၇။ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိမှတိုးတက်တယ်ဆိုပေမဲ့ အရာရာတိုင်းကို ယှဉ်ပြိုင်စရာလို့သဘောမထားသင့်ဘူး။
၂၀။ပျင်းရိခြင်းသည် အခွင့်အရေးကို ဆုံးရှုံးစေ၏။
၂၁။အလှတရားဆိုတာ ဘ၀သမားအတွက်တော့ မရှိမဖြစ်မဟုတ်တာ အသေအချာပါဘဲ။
၂၅။သူများကိုပေးပါ။ ဒါပေမဲ့ လက်ခံနိုင်စွမ်းရှိရဲ့လားဆိုတာကို သတိပြုပါ။
၂၆။သည်းခံတာနဲ့စိတ်ဓာတ်ပျော့ညံ့တာမတူဘူးနော် .... သူငယ်ချင်း။
၂၇။မျှော်လင့်ခြင်းမျိုးစေ့ကို ရေလောင်းပေါင်းသင်လိုက်ပါ။ တစ်ချိန်ချိန်မှာအသီးအပွင့်တွေနဲ့ ဝေဆာလာလိမ့်မယ်။
၂၈။ဟန်သမားထက် အမှန်သမားကို ပိုနှစ်သက်တယ်။
၃၁။မင်းရဲ့အပြုအမှုတွေကိုစစ်ဆေးပါ။ ချို့ယွင်းချက်တွေကို ပြင်ဆင်ပါ။
ချစ်သက် ဖတ်ဖူးတဲ့စာအုပ်တွေထဲကပါ အမှားပါသွားရင် နားလည်ပေးပါလို့ ....
Posted by lin linn at 7:33 AM
နှစ်ယောက်သား တကယ်ချစ်ကြိုက်နေရင် တချို့စကားတွေကို လုံးဝ မပြောမိပါစေနဲ့…
အဲဒီနေ့မှာ သူတို့ ရန်ဖြစ်ကြပြန်ပြီ…
အိမ်ထောင်ကျပြီးတာ တစ်နှစ်ဘဲရှိသေးတယ်… နှစ်ယောက်သား သေးသေးကြီးကြီး ရန်ဖြစ်နေကြတာ အဆက်မပြတ်ပါဘဲ…သူတို့ နှစ်ယောက်လုံး စဉ်းစားလို့ မရဘူး… အိမ်ထောင်ရေးဟာ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုပြောင်းလဲသွားရပါလိမ့်…သူတို့ထင်ထားတာက အိမ်ထောင်ရေးဟာ ချစ်သူဘ၀ရဲ့ အဆက်ဘဲ…
တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာတော့ နေနှင့်လ ၊ ရွှေနဲ့မြ လိုထင်ထားတာ မဟုတ်ဘဲ ကြောင်နဲ့ကြွက်လို တပူပူ တကြပ်ကြပ် ရန်ဖြစ်နေရတယ်…
ဒီတစ်ခေါက် ရန်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကလဲ ရှင်းရှင်းလေးပါ… သူအိပ်ယာထတာ နည်းနည်းနောက်ကျသွားတော့ အိမ်အောက်ထပ်ဆင်ပြီး မနက်စာ မ၀ယ်ထားနိုင်လို့ပါတဲ့…
သူမကတော့ ရေချိုးခန်းထဲမှာ သန့်စင်လိမ်းကျော့ပြီး ထွက်လာတော့ သူအိပ်ယာမထသေးတာလဲ မြင်ရော် ကတောက်ကတောက်နဲ့ ရွတ်တော့တာဘဲ… “မထသေးဘူးလား… နင်ငါ့ကို ငတ်ပြီးသေစေချင်နေတာလား…”
“တစ်နပ်မစားရလို့ ငတ်ပြီးသေနိုင်လို့လား…” သူ မကျေနပ်တော့ဘူး…
“နင် မှန်ရှေ့မှာဘဲ အချိန်ဖြုန်းနေတတ်တယ်… နင်ဒီလို အား နေရင်လဲ စောစောဆင်းပြီး ၀ယ်ထားပေါ့…”
“ဟဲ့… ဒါက ငါ့ အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေ… အစောကြီးကတည်းက ပြောထားပြီးသားဘဲ… ရှင်က မနက်စာ တာဝန်ယူ…. ကျုပ်က ညစာ တာဝန်ယူမယ်လို့ … ရှင်နော်…”
သူတို့ ဒီလိုနဲ့ စကားများကြပြီး… သူအင်္ကျီကို ကောက်ဝတ်လိုက်ပြီး မျက်နှာတောင် မသစ်တော့ဘဲ အပြင်ထွက်သွားတယ်… သူမကလဲ… ဘိုင်းကနဲ တံခါးကို စောင့်ပိတ်လိုက်ပြီး အော်ပြောလိုက်တယ်… “ရှင် ညကျရင် မပြန်လာနဲ့… ငါချက်တဲ့ ထမင်းဟင်း ရှင့်ကို မကျွေးနိုင်ဘူး…”
သူဆိုင်ကယ်စီးပြီး ထွက်သွားလိုက်တာ ပြန်တောင်လှည့်မကြည့်ဘူး…
ဟိုး ပူပူနွေးနွေး ချစ်သူဘ၀တုန်းကတော့ သူ့ကောင်မလေး စိတ်ဆိုးစိတ်ကောင်ရင်ဖြင့် သူ့ခမျာ လန့်တာ ၀ိဥာဉ်တောင်မကပ်ဘူး… ချက်ချင်းဘဲ စိတ်ကောက်ပြေတဲ့ အထိ ချော့တတ်တယ်… အခုတော့… သူဘယ်လောက်ထိ ဒေါသထွက်နေပါစေ… ဂရုတောင်မစိုက်တော့ဘူး…
သူ ၀ရံတာဘက်ကို ထွက်ပြီး ၀ရံတာမှာ တင်ထားတဲ့ ပန်းအိုးကို ပစ်ခွဲလိုက်တယ်… ပန်းအိုးလေးကတော့ မွမွကြေသွားရှာတယ်…
သူ့ ရင်ထဲမှာ နစ်နာမှု အပြည့်နဲ့ မျက်ရည်တွေ ယိုကျလာခဲ့တယ်…
ညဘက် ရုံးဆင်းပြီး ပြန်ရောက်တော့ မည်းမှောင်နေတဲ့ အခန်းလေးထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း မှိုင်နေရှာတယ်…
မနက်က ရန်ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ပြန်စဉ်းစားတော့ တော်တော်လေးရယ်ဖို့ကောင်းတယ်…
သူအိပ်ယာထတာ ၅ မ်ိနစ်လောက် နောက်ကျတာနဲ့ သူ့ကို ဒီလောက် အော်စရာလား?
ညက နက်တထက်နက်လာပြီ… အပြင်မှာလဲ မိုးတွေရွာလို့… ဒီလောက်ထိအေးစက်နေတဲ့ ညမှာ သူ ဘယ်များသွားနေပါလိမ့်…
အင်း မိုးအေးအေးနဲ့… သူပြန်ရောက်လာတာနဲ့ ညလယ်စာ ပူပူလေးစားလို့ရအောင် စွတ်ပြုပ်လေးတည်ထားလိုက်မယ်…
သူကတော့… အပြင်မှာ တနေကုန်လေနေတယ်… အပြင်မှာဘဲ ဆိုင်ကယ်ပတ်စီးနေတယ်…
သူအိမ်ကို ဖုန်းဆက်ချင်တယ်… “ရှင့်အတွက် ထမင်းဟင်းမချက်ထားဘူး… ဘာပြန်လာလုပ်တာလဲ…” လို့ အပြောခံရမှာလဲ စိုးတယ်…
ညဖက်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့မွေးနေ့… အဲ့မှာ သူလဲ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ သောက်တာ နည်းနည်းများသွားတယ်…
သူမကတော့ သူပြန်လာမဲ့အချိန်ကို စောင့်နေတယ်…
စွတ်ပြုပ်က နွေးပြီးရင် ပြန်ပြန်နွေးနေရတယ်… ဆိုင်ကယ်သံတော့ မကြားသေးဘူး…
သူသူ့ဆီကို ဖုန်းခေါ်ချင်ပါရဲ့… ဟိုဘက်က မာနတက်နေမှာလဲ စိုးပြန်တယ်…
သန်းခေါင်ထိ သောက်စားပြီးတော့ သူဆိုင်ကယ်စက်နိုးပြီး ထွက်အလာမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်က လာနေတဲ့ ကုန်တင်ကားကြီး တိုက်မိပြီး သူမြေပေါ်လဲကျခဲ့တယ်… တခဏတွင်းမှာဘဲ သွေးသံရဲရဲ နဲ့… သူသတိရနေတုန်း သူ လက်ကိုင်းဖုန်းက ပထမ ဂဏန်းကို နှိပ်လိုက်တယ်… ဒါဟာ သူ့နံပါတ်ပါ…
သူကတော့ ဧည့်ခန်းက ဆိုဖာပေါ်မှာဘဲ ထိုင်ပြီး သူပြန်လာတာကို စောင့်နေတယ်… မျက်ခုံးကလဲ ခပ်လှုပ်လှုပ်ဘဲ…
ဟန်းဖုန်းမြည်သံလဲ ကြားရော… သူထခုန်ပြီး ဖုန်းပြေးကိုင်လိုက်တယ်… ဒါပေမဲ့ ဟိုးဘက်က အသံမကြားရဘူး….
သူမ ပြန်ခေါ်လိုက်တော့ ဟိုးဘက်က လက်ခံပြောနေတာက သူစိမ်းယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ အသံ ဖြစ်နေတယ်…
“အခုဖုန်းပြောနေတာ ဘယ်သူပါလဲ?” သူမေးလိုက်တယ်…
“ကျနော်က တာဝန်ကျ ယာဉ်ထိန်းရဲပါ… ဒီအမျိုးသား ယာဉ်တိုက်မိလို့… ခင်ဗျားက ဘယ်သူပါလဲ?” သူစိမ်းယောက်ျားက သူ့ကို ပြန်ဖြေလိုက်တယ်…
သူမျက်နှာဟာ ချက်ချင်းကို ဖြူဖတ်သွားတယ်…
မနက်ထွက်သွားတုန်းက မှ အကောင်း… နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ ဘ၀ခြားသွားပါပြီ…
သူမ က အေးစက်နေတဲ့ အလောင်းကို အကြိမ်ကြိမ် ဆွဲဖက်ထားပေမဲ့လဲ အကြိမ်ကြိမ် ဆွဲခွာခံရတယ်…
သူငိုပြီးရင်ထပ်ငိုနေရှာတယ်… ချိုမြိန်တဲ့ စကား အချစ်ဆုံးစကားလေးတွေကို အကြိမ်းပေါင်းတစ်သိန်းပြောချင်နေပေမဲ့လဲ သူ မကြားနိုင်တော့ပါဘူး…
သူအခုမှ သဘောပေါက်လိုက်တယ်… သူ သူ့ကို ဘယ်လောက်ထိချစ်သလဲဆိုတာကို…
သူ့ကိုဆုံးရှုံးသွားပြီး နောက်မှာ သူလဲ သေဆုံးသွားသလိုပါဘဲ… လူတစ်ကိုယ်လုံး အားအင်တွေချိနဲ့လို့ ဒဏ်ရာ အပြည့်ရထားသလိုပါဘဲ…
သူ သူကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းဆည်းနေတုန်း… ဖုန်းရဲ့ Draft message မှာ စာတစ်စောင်တွေ့လိုက်ရတယ်… သူ အရက်သောက်နေတုန်း ရေးထားတဲ့စာလေး… ဒါပေမဲ့ မပို့လိုက်ရဘူး…
ရေးထားတာက “ချစ်လေးရေ… ငါ့ကို စောင့်နေနော်… ခဏနေဆို အိမ်ပြန်လာမယ်…”
သို့ပေမဲ့လဲ… သူ ထပ်ပြီး မပြန်လာတော့ပါဘူး…
နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်… သူ နောက်အိမ်ထောင် ထပ်ပြုလိုက်တယ်…
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ သူ သူ့နောက် အမျိုးသားနဲ့ ရန်မဖြစ်သလောက်ပါဘဲ… နောက်ပြီး… ဒီလိုစကားမျိုးကိုလဲ ထပ်မပြောတော့ဘူး… “ရှင် မပြန်လာနဲ့…”
သူစဉ်းစားမိတယ်… အချင်းချင်း ချစ်ကြိုက်မ်ိပြီ ဆိုရင် ကောင်းကောင်းအေးအေးလူးလူးနေတာဘဲ ကောင်းပါတယ်… လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ရင် … ချစ်ကြောင်းပြသဖို့ ၀န်မလေးပါနဲ့… တစ်ချို့ အချစ်တွေက အချိန်မှီ မပြောလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင် တစ်သက်လုံး အခွင့်အရေး မရှိတော့ပါဘူး…
Posted by lin linn at 6:57 AM
မပေါင်းသင်းအပ်သောမိတ်ဆွေ .....internetcopy များ ကနောင်သားလေး မှ
(၂) လက်တွေ့မပါ စကားနဲ့ပဲ ပေးတတ်သူ ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်းဆန်းအိမ်မှာ ဆန်ကုန်နေလို့ ရိက္ခာ ထုတ်ခိုင်းတာပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လက်မှတ်မပါဘဲ ဗိုလ်ကတော်ဒေါ်ခင်ကြည်လက်မှတ်ဖြစ်နေတယ်။ ရိက္ခာ တာဝန်ခံရဲဘော်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလက်မှတ်မပါလို့ ထုပ်မပေးနိုင်ဘူးပြောလွှတ်လိုက်တယ်။ ရဲဘော်တစ်ချို့ က ရိက္ခာ တာဝန်ခံ ရဲဘော်တော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆူပူကြိမ်းမောင်းတာကိုခံရတော့မယ်ထင်ကြတယ်။ တကယ်တမ်းဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တုန့်ပြန်လိုက်တာက မယုံနိုင်စရာပါပဲ။
ရဲဘော်တွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့စာကိုဖတ်ရတဲ့အတွက်ကြည်နှုးဝမ်းသာပြီးရယ်မောကြတယ်။ သဘောထားကြီးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပါတကားဆိုပြီး နှစ်ဆတိုးကြည်ညိုသဒ္ဒါ ပွားကြသည်။
Ref::: Thuyaaung Thuyaaung Thuyaaung
တစ်နေ့မှာ ငုံးတစ်ကောင်ဟာ အစာရှာနေခိုက် မုဖိုးတစ်ဦးရဲ့ အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။ ဒီမုဆိုးကငုံးတွေကို အရှင်ဖမ်းပြီး ငုံးသားစားချင်လို့ ငုံးဝယ်လာသူတွေကို ငုံးရောင်းစားတဲ့ အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးသူပဲ။ ဒါနဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ ငုံးလေးကိုမုဆိုးက ဖမ်းသွားပြီး အိမ်ရောက်တော့ အခြားငုံးတွေ နဲ့အတူ လှောင်ချိုင့်ထဲ ထည့်ထားလိုက်တယ်။
မုဆိုးက လှောင်ချိုင့်ထဲက ငုံးတွေကို အစာကောင်းကောင်း ကျွေးတယ်။ ကောင်းကောင်း အစာကျွေးတာကလည်း ငုံးလေးတွေ ဝဝလှလှလေးတွေ ဖြစ်လာအောင်လို့ပဲ။ ဝဝလှလှ စားချင်စဖွယ်လေးတွေ ဖြစ်လာမှလဲ ငုံးဝယ်သူတွေ မျက်စိကျပြီး ဝယ်ချင်မှာကိုး။ လှောင်ချိုင့်ထဲ ရောက်နေတဲ့ ငုံးတိုင်းဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ငုံးသားစားချင်လို့ လာဝယ်သူတွေရဲ့ လက်ထဲမှာ သေရမှာအမှန်ပဲ။ ငုံးတိုင်းဟာ မလွဲမသွေရောက်လာမယ့် သေခြင်းတရားကို လှောင်ချိုင့်ထဲကနေပြီး စောင့်ဆိုင်းနေရတာနဲ့ မခြားဘူး။
ဆိုခဲ့တဲ့ငုံးလေးဟာ သေရမယ့် ဘေးကိုမြင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခြားငုံးတွေလို အကြမ်း ဖက်ပြီး လွတ်အောင်မရုံးဘူး။ ရုန်းလို့လည်း မရနိုင်ဘူးဆိုတာ သူသိတယ်။ အကြမ်းဖက်တဲ့ ငုံးတွေဟာ အတင်းကာရောရုန်းကြ၊ ကန်ကြနဲ့ အတောင်ကျိုး၊ နှုတ်သီးကျိုးတွေဖြစ်ပြီး အဆုံးမှာ မောပန်းသေကြတာပဲ။ ခိုင်ခံ့တဲ့ လှောင်အိမ်ထဲကနေပြီး ဒီလိုအကြမ်းဖက်တဲ့ နည်းနဲ့ ဘယ်လွတ်နိုင်ပါ့မလဲ။ ပြီးတော့သေဘေးကို မမျှော်မတွေးကြတဲ့ အခြားငုံးတွေလို လဲ သူကမေ့မေ့လျော့လျော့မနေဘူး။
သေဘေးကို မမျှော်မတွေးကြတဲ့ ငုံးတွေဟာ မုဆိုးကျွေးသမျှ နင်းစားပြီး ပျော်နေကြ သေးတယ်။ ပြီးတော့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် ဆိုပြီးတော့ တခြားငုံးတွေလို သူက ကံကိုပုံချပြီး စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်မနေဘူး။ သူကစိတ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ သေခြင်းတရားက ဘယ်လိုလွတ် နိုင်ပါ့မလဲလို့ အကြံထုတ်တယ်။ နည်းလမ်းရှာတယ်။ ရှာရင်းကအကြံ တစ်ခုရလာတယ်။
ဒီအကြံနဲ့သူက မုဆိုးကျွေးလာတဲ့ အစာကို နည်းနည်းလေး မသေရုံကလေးပဲ စားတယ်။ အစာကို နည်းနည်းပဲစားတော့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးက ပိန်လာတယ်။ ချည့်နဲ့နဲ့လေး ဖြစ်လာတယ်။ ဒီလို ပိန်ပိန်ချည့်ချည့်လေးဆိုတော့ ငုံးဝယ်လာသူတွေက သူ့ကိုမျက်စိမကျ ဘူး။ မဝယ်လိုကြဘူး။ ဘယ်သူမှမဝယ်ကြလို့ ကျန်နေတာကပဲ သူ့အတွက် အခွင့်ကောင်းရ နေတယ်။ အကြံထုတ်ချိန်၊ စဉ်းစားချိန် ပိုရနေတယ်။
ဒါနဲ့နောက်ဆုံး တခြားငုံးတွေကုန်လို့ သူတစ်ကောင်တည်း ကုပ်ကုပ်လေးကျန်နေတော့ မုဆိုးက “ဒီငုံးလေးဟာ အစာကျွေးပါလျှက် ဝမလာပဲ ကုပ်ကုပ်လေးဖြစ်နေတာဟာ ရောဂါ တစ်ခုခုရှိလို့ထင်တယ်” လို့တွေးပြီး ငုံးလေးကို လှောင်အိမ်ထဲကထုတ်၊ သူ့လက်ဝါးပေါ် တင်ပြီး ငုံလေးမှာ ဘာရောဂါများရှိလဲလို့ စုံစမ်းတယ်။
မုဆိုးကဒီလောက်ချည့်နဲ့နေတဲ့ ငုံးလေးဟာ ချက်ချင်းတော့ ပျံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ဘူး။ ဒါကြောင့်သတိလည်း သိပ်မထားဘူး။ ဒါပေမယ့် ငုံးလေးကတော့ အကြံနဲ့ဆိုတော့ မုဆိုး သတိမထားပဲ လက်ဝါးပေါ်တင်ကြည့်နေခိုက်မှာ ဖြုတ်ဆို ပျံထွက်သွားတယ်။ ဆက်ပြီးသူ့ အပေါင်းအဖော်ငုံးတွေရှိရာ တောထဲအရောက် ပျံသွားတယ်။
ဒီနည်းနဲ့ သေရမယ့်ဒုက္ခ အန္တရာယ်ကနေပြီး ငုံးလေးဟာ လွတ်သွားခဲ့တယ်။ တကယ်လို့ သာငုံးလေးဟာ ကံအတိုင်းပဲဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်ကျနေရင် အခုလို အသက်ဘေးက လွတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အကြမ်းဖက်ပြီး လှောင်အိမ်ထဲက ရုန်းကန်ပြီး ထွက်နေရင်လည်း ပင်ပန်းပြီး သေဖို့သာရှိမယ်။ ဒါမှမဟုတ် မုဆိုးက “ဒီလောက်ရုန်းကန်ရလားလို့” ဒေါသထွက်ပြီး သတ်လို့ သေရင်လည်း သေသွားနိုင်တယ်။ သူ့မိတ်ဆွေတွေဆီ ပြန်ရောက်တော့ မိတ်ဆွေငုံးတွေက မေးကြတယ်။ ဘယ်ရောက်ဘယ်ပျောက်ပြီး ဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲပေါ့။
ဒီတော့ငုံးလေးက သူ့အဖြစ်ကို အစမှအဆုံးတိုင် ပြန်ပြောပြီး သူ့ဘဝမှာရခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာ ကိုလဲပေးလိုက်ပါတယ်။ “အဆွေတို့…. မကြံစည် မတွေးခေါ်သူ (အခြေအနေတွေကို မသုံးသပ်မဆင်ခြင် မရှုမြင်တတ်သူ)ဟာ အကျိုးထူးကိုမရဘူး။ ငါ့အဖြစ်ကိုသင်တို့ ကြည့်ပါ။
ကြံစည်စိတ်ကူးခြင်း၊ အခြေအနေတွေကို မျှော်ခေါ်ဆင်ခြင် တတ်ခြင်းကြောင့် မလွဲမသွေကြုံရမယ့် သေဘေးလို အန္တရာယ်မျိုးကတောင် ငါလွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်”တဲ့။ ဘဝခရီးမှာ ဥာဏ်အမြှော်အမြင်ရှိဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆရမှာပဲ။
တစ်နည်းဆိုရရင် အတွေးအမြင်ဒဿနဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ။ အခက်အခဲတွေကို ကြုံလာတဲ့အခါ အခြေအနေကို မှန်မှန်ကန်ကန် မသုံးသပ် မရှုမြင်နိုင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်ဘူး။ တွေဝေနေနိုင်တယ်။
ဒါကြောင့် ဒီပုံပြင်လေးကိုဖတ်ပြီး အခက်အခဲ ကြုံလာချိန်တိုင်း လုပ်သင့်လုပ်ထိုက် တာကိုလုပ်ပြီး အခြေအနေအချိန်အခါနဲ့ အခွင့်အခါကြုံတာနဲ့ တွေဝေမနေဘဲ လွတ်မြောက်ရာ လမ်းကြောင်းအမှန်ကို လျှောက်ဖို့၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမမှားဖို့၊ ထောက်ပြညွှန်ပြတဲ့ ပုံပြင်လေးမို့ ပြန်လည်ပြီး ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
Posted by lin linn at 7:08 AM
မနာလိုစိတ်Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare...
အခက်အခဲနဲ့ကြုံရတဲ့အခါ ခေါင်းမပူပဲ အေ...
အိပ်ရေးပျက်ခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများ ရေးမိရေ...
အရမ်းကောင်းတဲ့ သင်ခန်းစာလေးမို့လို့ သူငယ်ချင်းတွေ ...
နယူးယော့ခ်မြို့မှ ထာဝရမီးတောက်တည်ရှိမှု ပဟေဋ္ဌိဖြစ်နေ...
ရခိုင်ပြည်အနံ NLD ရုံးများရုပ်သိမ်းပေးရန်ရခိုင်လူင...
လူတစ်ယောက်ရဲ့  အောင်မြင်မှုကို ဘာနဲ့တိုင်းတာမလဲ Te...
ချစ်မေတ္တာ စာစုများ Thet Ko Ooချစ်မေတ္တာ စာစုများ ...
ငွေတစ်သန်းယူမလား? ငါ့သမီးယူမလား?(ဟာသ) Thet Ko Ooငေ...
Laptop အပူလွန်ကဲခြင်း နှိုင်းရင့်နွေLaptop အပူလွန်က...
အောင်မြင်တဲ့ လူငယ် တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ......... Aung...
ဒဿန Myawady Newsဒဿန ======= ၁။ကြိုးစား၍ရှုံးရသည်မ...
နှစ်ယောက်သား တကယ်ချစ်ကြိုက်နေရင် တချို့စကားတွေကို ...
မပေါင်းသင်းအပ်သောမိတ်ဆွေ .....internetcopy များ ကေ...
လေးစားထိုက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်Email ThisBlogThis!Share t...
ငုံးတစ်ကောင်ကပေးသော သင်ခန်းစာ Wunna Zinငုံးတစ်ကောင...
သတိထားပါ....ကိုယ့် ရည်းစား ကျွေးတိုင်း မစားမိပါစေန...
ကျား၊ မ ၀ိရောဓိများ (မေနဒီ) Aye Chan Monကျား၊ မ ၀ိ...
ချစ်သူနဲ့ ခွဲခွာရလို့ အထီးကျန်ရင် လူတိုင်းအထီးက...
ဥာဏ်ရည်ထက်မြက်စေမယ့် နည်းလမ်း (၅) သွယ် --------...
ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ သင် စွန့်လွှတ်ရမယ့် အရာ(၁၀)ခုP...
"အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဟောင်း အာရပ်-အမေရိကန်ကပြား စိတ်ရောဂါ...
ချိုမြိန်တဲ့ ဆီးသီး ဘ၀ဆိုတာ =============== ဘ၀...
Six Packs ဘယ်လို ရအောင် လုပ်ကြမလဲTHE SCIENCE OF S...
"အစအဆုံး သေချာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ" Myanmar News Update...
မြန်မာ မြို့ ရွာ လူနာမည် များကို အင်္ဂလိပ် လိုရေးနည်...
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ သိသင့်သော ဗုဒ္ဓဂယာ သမိုင်းအကျဉ်း.ဗု...
အနိုင်ရတယ်ဆိုပေမယ့် သင်ရှုံးနေပါပြီ Nine Nine Sanay...
ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ထင်ရှားနေသော ဘာသာရေးတရားများ အကြေ...
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးများ Today...
၀င်းပစိုပြေအသားအရေ ================ လူတိုင်းဟာေ...
အဆိုး/အကောင်း နှိုင်းရင့်နွေအဆိုး/အကောင်း --------...
အိပ်စက်ခြင်းနဲ့ လူ့မှတ်ညဏ် လူဟာ ဘ၀တလျှောက် မပြတ...
လက်ရှိအချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချပါ Myanmar Ne...
လူကိုနွေးထွေးစေတဲ့ စကားငါးခွန်း Today Myanmarလူကို...
ထပ်တိုး ဥပဒေBlack Angle# အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်အစ္စလာမ...
ပညာနဲ့ ပိုက်ဆံ ဘယ်ဟာ အရင်ရှာမလဲ TechSpace Journalပ...
ဖခင်တယောက်ရဲ့ မကွယ်လွန်မီ မှာတမ်းစာ
အစ္စလာမ်မစ်ဇေးရှင်း ပြုနေခြင်းအား ၊ စုပေါင်း ကာကွယ်...
ဒေါသကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ဘယ်လိုအစားထိုးမလဲ Khant ...
မုန်တိုင်း MAHASEN လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး ဘင်္ဂလားဒေ...
"ခလေး နှင့် ခိုးတက်ခြင်း ခလေးလေးရဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာ နဲ့ ...
တစ်ဝါးဝါး တစ်ဟားဟား10:20 AM ဖတ်ဖူးတဲ့ ဟာသလေးတွေ က...
ကျွန်ပျူတာဖြင့် 'ခြင်' နှိမ်နှင်းနည်း4:22 PMမောင်ေ...
ဘဝမှာလိုက်နာသင့် တာလေးတွေ.. (၁) မှတ်သင့်တာကိ...
၉၆၉ အခွေရောင်းတဲ့ သူတွေကို ရဲတွေက အကြောင်းရှာဖမ်းဆ...